Deedoke: 02/01/2007 - 03/01/2007
ဒီနေ့မနက် ရုံးရောက်ရောက်ခြင်းဘဲ ရုံးခန်းထဲ(ပလတ်စတစ်အိတ်နဲ့အသေအချာထုတ်ပြီး)မနေ့ကသိမ်းထားခဲ့တဲ့ မနက်စာကို အိမ်ကယူလာတဲ့ OrangeJuice နဲ့လွေးတော့မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားနေတုံး...အောင်မလေး..အိတ်ထဲမှာ ပုရွတ်ဆိတ်တွေဗျ။ သွားပါပြီ မောင်ဒီး မနက်စာ။ တတ်နိုင်ပါဘူး...OrangeJuice နဲ့ဘဲကျေနပ်လိုက်ရတော့မှာပ။ သကောင့်သားများက ပလတ်စတစ်အိတ်ကို ကိုက်ဖောက်ပြီးမှ ဝင်သွားကြတာခင်ဗျ။ ပလတ်စတစ်အိတ် ကိုဖောက်ပြီးဝင်နိုင် မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်မိတဲ့ အကျွန်ုပ်အပြစ်။ ရုံးက fridge ထဲသွားထားရင်လဲ လူရန်ကိုကြောက်ရတယ် ဆိုပြီး ကိုယ့်ရုံးခန်းထဲကိုယ်ထားခဲ့တာပါ။
(ကိုယ်လည်း fridge ထဲက သူများမုန့်ကိုယူစားဘူးတယ်...အဟီး...)
ငယ်ငယ်ကသင်ဘူးတဲ့ ပုရွက်ဆိတ် နဲ့ နှံကောင် ကဗျာကိုလည်းသွားသတိရမိရဲ့။ ဘာတဲ့.....
ဟုတ်ကဲ့ ဦးခေါင်းညိတ် (တကယ် ညိတ်မညိတ်တော့မသိဘူး အဲလိုတော့ရေးထားတာဘဲ)
အခုဟာက ဆန်စေ့ကိုစုနေတာမဟုတ်...မောင်ဒီးရဲ့ Breakfast ဖြစ်တဲ့ Whole Wheat CreamCracker ကို လာရောက်ဖောက်ထွင်းနေကြတာကလား။ အေးလေ...ခုခေတ်ပုရွက်ဆိတ်တွေလည်း အရင်ကနဲ့တော့ ဘယ်တူကြတော့မှာလဲ။ အဲဒါနဲ့ပုရွတ်ဆိတ်အကြောင်းရှာကြည့်မိတော့... ဒီနေရာမှာ..ပြောပြထားတာက ပုရွက်ဆိတ်တစ်ကောင်မှာမှတ်ဥာဏ်အနည်းငယ်တော့ရှိပြီး ရိုးစင်းတဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုလည်းရှိကြတယ်။
ဒါပေမယ့်...အစုအဖွဲ့လိုက်ဆိုရင်တော့ အံ့မခန်းစုစည်းပြုမူလုပ်ဆောင်နိုင်မှု၊ကြီးမားတဲ့ပစ္စည်းတွေသယ်ယူတာ၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့ တံတားတွေဖြစ်အောင်ဆောက်တာ၊ ပြီးတော့ သူတို့အသိုက်ကနေအစာရှိတဲ့ နေရာကို အတိုဆုံးလမ်းကြောင်းကို စုပေါင်းရှာဖွေနိုင်ကြသတဲ့။ တစ်ကောင်ခြင်းဟာ ဘာမှဝေးဝေးလံလံစဉ်းစားမနေဘဲ လက်ရှိဝန်းကျင်အနေအထားအရ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ကြတယ်။ သူတို့ဥာဏ်စွမ်းကတော့တစ်ကောင်ခြင်းစီဆောင်ရွက်တတ်မှုရယ် အခြားအကောင်တွေနဲ့သွယ်ဝိုက်ဆက်သွယ်မှုတို့ရယ်ပေါင်း စည်းမှုကပေါ်ထွက်လာတဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို...Emergent Behavior... သို့...Emergent Intelligence...လို့ခေါ်ပါသတဲ့။ (မြန်မာလို ရမ်းသန်းပြန်ကြည့်လိုက်ရင် လတ်တလောပေါ်လာသောအပြုအမူ ...သို့...လတ်တလောပေါ်လာသောဥာဏ်စွမ်း လို့ခေါ်နိုင်မလား?)
အဲဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအခြေခံပြီး AI--Artificial Intelligence (ဥာဏ်ရည်တု)နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ အခြေခံအကြောင်းအရာတွေကိုတောင် ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မင်း နဲ့ထုတ်နုတ်စဉ်းစားပြထားသဗျ။ (မောင်ဒီးကတော့ လိုက်မမီတော့ပါဘူးဗျာ... ) အဲဒါနဲ့အတူ collective behavior ဆိုတဲ့ စုစည်းပြုမူလုပ်ဆောင်မှု ဆိုတာကိုလည်း သတိထားမိလိုက်ပါတယ်။ စုပေါင်းညီညာ အောင်ကြောင်းဖြာ သွားကြတဲ့ ပုရွက်ဆိတ်များပါတကား။...
Posted by ဒီးဒုတ် at 2/20/2007 01:55:00 PM0comments
အဲဒီထဲက Spirit corner ရဲ့ ဒီလို ပို့စ်လေးတွေကြိုက်တယ်။
ကျွန်မဒီလောက်တောင် အင်္ဂလိပ်တွေအကြောင်းပြောနေတော့ သူတို့ဟာ သိပ်တော်၊ သိပ်ကောင်းတဲ့ လူတွေလားလို့မေးလာခဲ့ရင် ကျွန်မက မဟုတ်ပါဘူးလို့ ချက်ချင်းဖြေမှာပါ။ သူတို့ဟာ ပညာတတ်တွေပီပီ ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ ပညာရှိနည်းတွေနဲ့လည်း နှိပ်စက်တက်ပါတယ်။ ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလောကမှာလည်း နောက်ကနေ လိုသလို ကျားကွက်ရွေ့နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကမ္ဘာမှာ တောင်ကိုရီးယားနှင့် မြောက်ကိုရီးယား ၊ အိန္ဒိယ နှင့် ပါကစ္စတန်၊ မြန်မာပြည်မှာတောင် အထက် နှင့်အောက် မြန်မာပြည်ရယ်လို့ စသည်ဖြင့် သေသေချာချာ သွေးခွဲနိုင်ခဲ့တာ သူတို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ဘယ်လောက်တော်လဲဆိုရင် သူတို့နယ်ချဲ့ခဲ့ပေမဲ့ နယ်ချဲ့ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေဟာ သူတို့ကို မမုန်းကြပါဘူး။ သူတို့ကို အထင်ကြီးလေးစားခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ ကိုလိုနီခေတ်၊ မဆလ ခေတ်၊ နအဖ ခေတ်တွေထဲမှာ ဘယ်ခေတ်ကိုကြိုက်သလဲမေးရင် ရှေ့မှီနောက်မှီတွေထဲမှာ ကိုလိုနီခေတ်ကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအများကြီးပါ။
Posted by ဒီးဒုတ် at 2/13/2007 02:50:00 PM0comments
တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးထံရောက်သွားခဲ့သတဲ့။ ရောက်ရောက်ချင်းတံခါးကိုဝုန်းကနဲ
တွန်းဖွင့်လိုက်ပြီး “ဟေ့ ဘုန်းကြီး...နိဗ္ဗာန်နဲ့ငရဲ ဘာတွေကွာခြားသလဲ ပြောစမ်း” လို့
ဘုန်းတော်ကြီးကတော့ သူ့ရဲ့ တာတာမိ* ခင်းထားတဲ့ကြမ်းပြင်မှာ
မလှုပ်မလျှက်ထိုင်နေရာက စစ်သည်ဘက်ကို လှည့်ပြီးမော့ကြည့်ပြီး ပြန်ပြောလိုက်တယ်...
“ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆာမူရိုင်းစစ်သည်တော်လို့ခေါ်တာ မင်းလား...ဟုတ်စ” (ခနဲ့ပြုံးကလေးနဲ့)
မင်းကိုယ်မင်းကြည့်လိုက်စမ်း...မင်းဟာ လူ့တံတွေးကွက် ကလေးတစ်ခုမျှသာဘဲ”..
“ဘာကွ”...ဆာမူရိုင်းဟာကြုံးဝါးလိုက်ပြီး လက်က သူ့ဒါးပေါ်ရောက်သွားတယ်။
(ဆာမူရိုင်းဒါး ကို ရုပ်ရှင်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် အပြင်မှာဖြစ်ဖြစ် မြင်ဘူးမှာပေါ့...)
“အလိုလေး...ဒါးတောင်သုံးမလို့ပါလား။ ယင်ကောင်ကိုခေါင်းပြတ်အောင် ခုတ်မလို့လား..”
ဒေါသအမျက် ချောင်းချောင်းထွက်သွားတဲ့ဆာမူရိုင်းဟာ ဘယ်လိုမှ ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်း
မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါးအိမ်က ဒါးကိုထုတ်လိုက်ပြီး ခေါင်းပေါ်ထိအောင် မြှောက်လိုက်ပြီးတော့
ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့ခေါင်းကိုခုတ်ဖြတ်ဘို့ ရွယ်မလိုက်တယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးကတော့
“အဲဒါ..ငရဲဘုံ ရဲ့ဝင်ပေါက်တံခါးဝပေါ့ ငါ့သားရယ်”...
ဘုန်းတော်ကြီးဟာ ကိုယ့်ရဲ့အသက်နဲ့ရင်းပြီး သူ့ကိုတရားပြလိုက်တယ်ဆိုတာ
သဘောပေါက်သွားတဲ့ ဆာမူရိုင်းစစ်သည်ဟာ ဒါးကို ဒါးအိမ်ထဲ အသာပြန်ထည့်လိုက်တယ်။
ဦးခေါင်းကိုနှိမ့်ချ ဝပ်တွားလိုက်ပြီးတော့ ဘုန်းတော်ကြီးကို အရိုအသေပြုလိုက်ပြီး
“မိတ်ဆွေရယ်...ဒါဟာ ကောင်းကင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ တံခါးဝပေါ့ကွယ်။”...ဘုန်းတော်ကြီးကလည်း
* တာတာမိ = tatami-ဂျပန်မြက်ဖျာ
New Society Publishers, 1992. New edition 2002. မှ John Porcino ရဲ့
The Monk and the Samurai ကိုဆီလျော်အောင်ပြန်ဆိုပါတယ်။
Posted by ဒီးဒုတ် at 2/07/2007 02:06:00 PM0comments